Kunamata Points Kumisuo Yakavharwa | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Munyengetero Kunamata Kunongedzera Kumisuo Yakavharwa
Kunamata Kunongedzera Kumisuo Yakavharwa
Nhasi tichange tichiita zvekunamatira takatarisana nemikova yakavharwa. Chinyorwa chakatsanangura Mwari saMwari wezvese zvinobvira, uye iye anovhura musuwo wakakiiwa. Kune vanhu vazhinji kwazvo avo musuwo webudiriro wakavharwa nemuvengi. Ishe vachazarura musuwo wakadai nhasi nesimba ravo. Izvo zvakanyorwa; Ini ndichaita chinhu chitsva, ikozvino chichamera, nekuti imi hamuzivi, ndichagadzira nzira murenje, uye rwizi musango. Izvi zvinoreva kuti Mwari ega ndiye anokwana kugadzira nzira pasina nzira. Kunyangwe pakavharwa musuwo, simba raMwari rinogona kuvhurika mumwe munhu.
Bhuku rekuzarurirwa Zvakazarurwa 3: 7:
7 Uye kumutumwa wekereke iri paFiladelfia nyora kuti; Things saith holy holy is, hath he David,,,,,,,;;;;;。 Zvinhu izvi ndizvo zvinoreva iye Mutsvene, ndiye wechokwadi, iye une kiyi yaDhavhidhi; Anopfiga, uye hakuna munhu anovhura. Icho chirevo chemuBhaibheri ichi chinoreva ndechekuti Mwari ane kiyi yemusuwo wega, uye kunyangwe paine chero musuwo wakavharwa usina kiyi, Mwari vane simba rekuputsa. Rangarira rugwaro ruri mubhuku ra Isaya 45: 2 Ini ndichaenda pamberi pako, uye ndichayeresa makomo; Ndichaputsa masuo endarira, nokuvhuna matanda esimbi. Nhasi, ndinoraira kuti mweya waIshe uende pamberi pako nekutyora musuwo wese wedare nemuzita raJesu. Musuwo wese wakavharwa pamberi pako urikutadzisa kubudirira, Ishe vachaputsa musuwo muzita raJesu.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti musuwo hauzovharwa kunze kwekunge iine zvimwe zvakakosha. Kana paine musuwo wakavharwa pamberi pako, iko kuvimbiswa kuti kune zvinhu zvakakosha mairi. Ndokusaka muvengi nguva zhinji achishandisa musuwo wakavharwa sechivhiringidzo mukubuda kwevakawanda. Mweya waMwari wakaburitsa pachena kuti vanhu vakati wandei vatove padanho rekubudirira, asi nzvimbo iyo imba yavo budiriro yakavharwa. Musuwo wakavharwa nemuvengi kutadzisa munhu kuwana mukana wavo. Mwari akagadzirirwa kuita izvo izvo chete zvaanogona kuita. Akavimbisa kuputsa musuwo wega wega wakavharwa kuitira kuti vanhu Vake vagone kuwana maropafadzo avo. Iyi yekunamatira nhungamiro kuburikidza nemweya waMwari inokupa iwe minamato yekukomberedza pamikova yakavharwa, uye ndinonamata kuti Mwari sha Teererai kuzwi rekukumbira kwako.
Baba Tenzi, ndinonamata kuti musimuke nhasi pamusoro pemamiriro ehupenyu hwangu uye itai izvo chete zvamunogona kuita muzita raJesu. Ishe ndinonamata nesimba renyu. Iwe uchaputsa gonhi rega rakavharwa muzita raJesu. Musuwo wese wakavharwa kupokana nemaropafadzo angu uye kufambira mberi, ndinoraira kuti madhoo akadaro akaputswa muzita raJesu.
Ishe Mwari, musuwo wese wakavharwa nekuda kwekubuda kwangu, zvichikonzera kuti ndishande zuva rose neusiku nekuda zvishoma, ndinonamata kuti madhoo akadaro aputswe muzita raJesu. Wese murume akashata mukadzi nemukadzi akavhara musuwo wekubudirira kwangu uye akachengeta kiyi yekubudirira kwangu, Ishe, ndinonamata kuti musimuke uye muratidze kuti muri Mwari pamusoro penyaya yangu muzita raJesu.
Vese makapfiga mikova kuvana vangu, moto waMwari uvhure izvozvi muzita raJesu. Musuwo wese wakavharirwa vana vangu urikukonzera kuti vasakwanise kuwana zvinhu zvakanaka zvavari kuwana vavakaroora vasina kunetseka, ndinonamata kuti kutinhira kwako kuzarure madhoo akadaro muzita raJesu.
O Mwari waEria, simuka zvino mumoto wako uparadze murume nemukadzi vese vakaisa chipingamupinyi pakati pangu nekubudirira kwandakaita; Ndinonamata kuti moto weMweya Mutsvene uparadze murume nemukadzi vakadaro muzita raJesu.
Baba Tenzi, zvese zvakavharwa zvinovhurwa netsitsi dzaIshe. Ndinonamata kuti ngoni dzenyu dzionekwe muhupenyu hwangu nhasi muzita raJesu. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi, "Ndichanzwira tsitsi wandichanzwira tsitsi uye netsitsi pane wandinozova naye." Ishe, ndinonamata kuti netsitsi, mundiverengere ndakafanira kuve pachikwata chevanhu chauchanzwirwa tsitsi muzita raJesu.
Ishe Mwari, makataura mushoko renyu kuti muchatungamira pamberi pangu uye muchakwiridzira nzvimbo dzakakwirira. Izwi rako rakati iwe waizotyora musuwo wendarira uye kucheka musuwo wedare. Ndinonamata kuti gonhi rega rega resimbi rakange rakavharwa pandiri riputse nhasi muzita raJesu.
Jehovha Mwari, musasa wese wemuvengi kuzorwa neupenyu hwangu ngausvibiswe nenyonganiso muzita raJesu. Kuungana kwese kwevanhu kuri kupesana nekufambira mberi kwangu muhupenyu, ndinonamata kuti muvhiringidze pakati pavo nhasi muzita raJesu. Ndinoraira kuti iwe uchavhiringidza kuedza kwevavengi vangu nekutadza muzita raJesu.
Ishe, nekuti kwakanyorwa kuchinzi, Ndichakupa kiyi dzeumambo hwekudenga, uye chipi nechipi chauchasunga panyika chichasungwa kudenga, uye chipi zvacho chaunosunungura pasi pano chichasunungurwa kudenga. ” Ini ndinotora kiyi yangu kune pfuma yekudenga muzita raJesu. Iwe wakandivimbisa kuti chero chandinosunga pasi pano chichasungwa kudenga, uye zvese zvandinosunungura pasi pano zvichasunungurwa kudenga. Ndinoputsa misuwo yose yakavharwa yehupfumi muzita raJesu.
Baba, ndinokutendai nekupindurwa kweminamato, ndinokutendai nekuti kubva zvino ndichatanga kuona shanduko muhupenyu hwangu, ndinokutendai Ishe nekuti ndimi Mwari, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.
munamato pamikova yakavharwa
Previous nyayaKunamata Kunongedzera Kurwisa Kukanganiswa
inoteveraKunamata Kunongedzera Kupokana Kunonoka MuKubata
Nzira Shanu Dzokunamata Mune Hondo Yemweya
Maitiro Ekuwana Zvemweya Kutungamira kwaMwari
Mapisarema 51 Zvinorehwa Ndima neNdima
Mafe Gumiguru 29, 2020 Na12: 24 pm
Zvakafanana naGd anoda chaizvo kundiropafadza, asi ini ndinofanirwa kuita nemazvo kunyengeterera kuti zviitike
monteiro vunge Mbudzi 26, 2020 At 9:22 am
Gostei desta oração, é muito profunda e muito boa e agradavel de se repetir.
Irmáos em Cristo, for favour ajudem-me a orar na minha vida e na vida dos meus Pais e Irima, Irima, Sobrinhos, Sobrinhas, Avõs, e Familias no seu todo.
Ri peço ao Senhor tods os dias para resgar o meu coração e quebrar tudo que they prove that do Senhor Jesus, nas nossas vidas e na vida da minha familia.
monteiro vunge Mbudzi 26, 2020 At 9:24 am
Irmáos em Cristo, for favour ajudem-me a orar na minha vida e na vida dos meus filhos, e meus Pais e Irima, Irima, Sobrinhos, Sobrinhas, Avõs, e Familias no seu todo.
Rosh Kubvumbi 13, 2021 At 4:51 pm
Mwari vakuropafadzei ndinogara ndichinamata munamato zvibodzwa pane ese matambudziko Ndatenda
Minamato makumi matatu Yepamberi Muhukama
Mahara 100 Emunamato weKusimudzira kweVamwari